प्रहरीको निशाना जुवाडे र पटका – जागरण अनलाइन
प्रहरीको निशाना जुवाडे र पटका
२०७५ कार्तिक २२, बिहीबार १७:१६ मा प्रकाशित
चाडपर्वमा हुनसक्ने अपराधका घटनाहरूलाई कम गर्न पाँच नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाएको छ । चाडवाडको समयमा जिल्लाहरूमा मानिसको चाप बढि हुने र त्यसबेला अपराधका घटनाहरू घट्न सक्ने भन्दै प्रदेश प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको बताएको छ ।
पाँच नं. प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूलाई योजनाका बारेमा जानकारी दिइसकिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक पिताम्वर अधिकारीले जानकारी दिए । चाडवाडको समय भन्दै जुवातासका अखडा सञ्चालन गर्नेहरूलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको उनले बताए । त्यसैगरी विष्फोटकजन्य बस्तु जस्तै पटकाको खरीद तथा विक्रि गर्नेलाई मुद्दा चलाउन मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जुवातास पनि मनोरञ्जनको साधनको रूपमा खेल्ने भन्दापनि अखडा नै खडागरी जुवाखेल्ने तथा खेलाउनेलाई पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
नेपालीहरूको महान चाड शुभदिपावलीमा पटकाजन्य विष्फोटक पदार्थहरू विष्फोट हुँदा लाखौंको धनजनको क्षति हुने हुँदा पटका खरीद विक्रि गर्ने दुवैलाई विष्फोटक पदार्थ ओसारपसार ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने पाँच नं. प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरीले पटका भित्रिन सक्ने प्रदेश अन्तर्गतका नाकाहरूमा कडाई गरिरहेको जनाएको छ । भैरहवाको सुनौली नाका, त्यसैगरी कृष्णनगर, नेपालगञ्ज तथा बर्दियाको छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा निगरानी तथा चेकजाँच बढाएको छ । “बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुका साथै विष्फोटक पदार्थ ल्याउन नदिनु नै प्रहरीको पहिलो काम भएकोले चेकजाँचलाई बढाइएको छ” अधिकारीले भने ।
त्यसैगरी अपराधका घटना हुन सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रहरीको निगरानी बढाइएको अधिकारीले बताए । “सुनचाँदी पसल, वैङ्क, मेला तथा हाटबजार लाग्ने ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ” प्रदेश प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने । तिहारमा प्रायःजसो देउसी भैलो खेल्ने समूहका बीचमा कुटपिटका घटनाहरू भैरहेको भन्दै पाँच नं. प्रदेश प्रहरीले राति १० बजे भन्दा पछाडी भैलो नखेल्न आग्रह गरेको छ । “अहिलेको युवा पिढिहरू देउँसी भैलोबाट संस्कृति जोगाउने भन्दा पनि रीसिईवि साँध्ने र घटनाहरू घटाउने देखीएकोले राति १० वजे भन्दा पछाडि देउँसी भैलो नखेल्न आग्रह गरेका छौ” अधिकारीले भने । त्यस्तै चाडपर्वको समयमा नागरीकहरूले किनमेल बढि गर्ने हुँदा व्यापारीहरूवाट कालोवजारी हुनसक्ने भन्दै वजारमा निगरानी गरीरहेको प्रदेश प्रहरीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी लुटपाटका घटनाहरू पनि घट्न सक्ने भन्दै प्रदेश प्रहरीले नागरीकले पनि उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । “प्रहरीले मात्रै केही गर्न सक्दैन त्यसैले नागरीक र प्रहरीमा समन्वय जरुरी छ” अधिकारीले भने ।
जिल्लामा रहेको प्रहरीले मात्रै सुरक्षा मजबुद नहुने भएकोले प्रदेश प्रहरीले १२ वटै जिल्लाहरूमा थप प्रहरी पठाएको जनाएको छ । जिल्लामा रहेको प्रहरीले सामान्य समयमा सुरक्षा प्रदान गरीरहेकोले चाडवाडको समयमा प्रहरीको संख्या थप गर्नुपरेको पाँच नं प्रदेश प्रहरीको भनाई छ । “प्रदेश भित्र रहेका प्रहरी गण तथा गुल्ममा रहेका प्रहरीहरूलाई झिकाएर जिल्ला जिल्लामा पठाईसकिएको छ” प्रदेश प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तराईका जिल्लाहरूलाई संवेदनशील जिल्ला भएको भन्दै पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा बढि प्रहरी परिचालन गरीएको जनाएको छ ।
पिताम्वर अधिकारी , प्रदेश प्रहरी प्रमुख, ५ नम्बर प्रदेश
दाङका सञ्जिव श्रेष्ठलाई अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षक सर्टिफिकेट २०७५ कार्तिक २२, बिहीबार १७:१६
७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक पक्राउ २०७५ कार्तिक २२, बिहीबार १७:१६
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिए बिष्णु पौडेललाई कार्वाही हुन्छ : ज्ञवाली २०७५ कार्तिक २२, बिहीबार १७:१६